Xukuumadda Soomaaliya oo faah faahisay shir ka furmaayo Muqdisho | Banaadir Times
HomeUncategorisedXukuumadda Soomaaliya oo faah faahisay shir ka furmaayo Muqdisho
Xukuumadda Soomaaliya oo faah faahisay shir ka furmaayo Muqdisho
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa la filayaa in Maanta oo arbaco ah in uu ka furmo shir looga hadlayo amniga iyo Maalgelinta, iyad aoo Xukuum adda Soomaaliya ay faah faahin ka bixisay shirkaas.
Shirka ayaa waxaa ka qeyb-geli doona, Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, Wakiilo ka socda Beesha Caalamka iyo hay’ado Caalami ah, waxaana qiimeyn lagu sameyn doonaa xaalada amni ee dalka iyo maalgashiga lagu sameeyay Soomaaliya heerka uu gaarsiisan yahay.
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay Shirkaan uu yahay mid lagu qiimeynaayo amniga dalka, lacagaha maalgelinta, deyn cafinta,.
Waxaa uu hadalkiisa intaasi uu ku daray in inta uu shirka socdo la ogaan doono qof walba oo soomalaiya lacag keenay oo maalgashaday, taas oo horudhac u ah Warbixin soo baxeysa sanadka 2024 Saddex Sano kadib.
Wasiirka Maaliyadda ayaa shalay Muqdisho uga qeyb-galay shir looga hadlayay khataraha lacag dhaqida iyo maalgelinta Al-Shabaab, kaas oo uu furay Ra’iisul Wasaare kuxigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed.
Previous articlePuntland oo wado qorsho lagu hirgelinayo Amaro kasoo baxay
Next articleLaamaha Amniga oo dad u qabtay dil ka dhacay Galgaduud